भिडियो – Rabin's Blog
रातको कुरा शहरभरी, नसाको म मातमा परी… यहाँ सबैको आफ्नै कथा, चर्को घाम कसैको त कसैको झरी… जीवनको नदेखिएको कथा अनि यथार्थ हो यो हरफ, कथा काठमाडौँको। एक बार गर्लको कथालाई प्रस्तुत गरेकी छिन् गायिका इन्दिरा जोशीले। देखिँदा एक तर हुँदा अर्कै हुने मानिसको कथालाई गीतले प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौँमा आज
Buletin Post July 22, 2018 भिडियो	0
काठमाडौँ। गायिका इन्दिरा जोशीको स्वरमा चलचित्र ‘कथा काठमाडौँ’को गीत सार्वजनिक भएको छ। ‘रातको कुरा’बोलको उक्त गीतमा शब्द र सङ्गीत प्रदीप बास्तोलाको रहेको छ भने सन्दीप कार्कीले एरेन्ज गरेका छन्। सञ्चारकर्मी सङ्गीता श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशन रहने चलचित्र कथा काठमाडौँमा प्रिंयका कार्की, आयुश्मान देशराज जोशी, प्रमोद अग्रहरी, संजोग कोइराला, मोडल तथा भिजे
काठमाडौँ- चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला बिहीबार काठमाडौं आइपुगिन् भारतबाट र अनशनको २० औँ दिन डा. गोविन्द केसीलाई सुरक्षाकर्मीले जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याए बलपूर्वक सोही दिन। दुवै आगमन संयोग थिए। तर कोइराला डा. केसीलाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुर्‍याएकाे केहीबेरमै त्यहाँ पुगिन, उनलाई भेट्न । शुभकामना दिन। त्यो संयोग मात्रै थिएन। वास्तवमा उनी
लुटिनलाई बाँकी के नै पो छ र रबिना बादीसँग ? गुमाउनलाई पनि के नै पो छ र ? जसले उनलाई लुट्यो तिनै बलात्कारीकै श्रीमती जबरजस्ती समाजले बनाईदियो त्यो पनि बाबुको उमेरको मान्छेसँग । दोस्रो बिबाह गरिन, उनले पनि छोरो सहित यो हालतमा पशुपतिमा छाडेर बेपत्ता भएको अबस्थामा समाजसेवी किशोर सुनुवारको
दुनियाँ बेग्लै छ, हैन भन्देउ न माया, घिन घिन बज्यो मादलु, मेरो स्टाइल यस्तै छ लगाएतका गीत गाएर चर्चामा रहेका गायक समिर आचार्यले नेपाली सांगेतिक दुनियामा फेरि अर्को एउटा धमाका सहित नयाँ गित बजार ल्याएका छन । केहि समय पहिला मलेसिया, कतार लगाएतका देशहरु को भ्रमणमा निस्किएका समिरले आफ्नो नयाँ गीतको
सर्पले निलेको मान्छे सर्पकै पेटभित्र उठेको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित)
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले व्यापकता पाएसँगै अपत्यारिला घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । समाजमा लुकेका र विश्वास गर्न कठिन हुने घटना बाहिर आउने गरेका छन् । यस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल बनिरहेको छ । जुन भिडियोमा सर्पले मानिसलाई निलेको छ । मानिस सर्पको पेटभित्र पुगेको देखिन्छ
मेरो पनी पर्सनल लाईफ हुन्छ भन्दै शनिबारको दिन पनी सरकारी गाडीमा हुइकिने यातायातका हाकिमको टिसर्ट यसरी च्यातियो (भिडियो)
Buletin Post July 17, 2018 भिडियो	0
काठमाडौँ । गत असार ३० गते शनिबार पोखराको छोरेपाटनमा एउटा कारले मोटरसाईकललाई ठक्कर दियो।बा २ झ २४३४ नम्बरको उक्त कार सरकारी नम्बर प्लेटको थियो र त्यसमा यातायात कार्यालय गण्डकी लाईसेन्स शाखा प्रमूख तेज नारायण यादव थिए । भिडियो हेर्नुहोस: यादवले चलाएको उक्त गाडीले ग ११ प ११ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिएको थियो।
Buletin Post July 14, 2018 भिडियो	0
काठमाडौ – विगत डेढ बर्षदेखि प्रेममा रहेको जोडी नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले इन्गेजमेन्ट गर्दै आफ्नो सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाएका छन् । शनिबार यो जोडीले इन्गेजमेन्टको टिकाटालो गरेको हो । दुइको इन्गेजमेन्टमा उनीहरुको परिवारमात्र सहभागी थिए । ﻿ मिडियालाई थाहा नदिई इन्गेजमेन्ट गोप्य बनाउने योजना गरिएको थियो । उनीहरुको
ज्योति मगरले मच्चायिन फेरी अर्को तांडव – हेर्नुहोस भिडियोमा
Buletin Post July 13, 2018 भिडियो	0
काठमाडौँ। छोटा पहिरन, गोप्य अङ्ग देखाउनमा कन्जुस्याइँ नगर्ने, खुला विचार, मस्ती र मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्न जानेकी कलाकार भनियो भने ज्योति मगरको हकमा खास फरक पर्दैन । दुई अर्थ लाग्ने गीत संगीतदेखि अनेक स्टन्टबाजीले ज्योति चर्चामै हुन्छिन् । ﻿ उचाइ , रूप, फिगरको हिसाबले ज्योति कुनै मोडल जस्ती लाग्दिनन् । तर हुन्छ उनकै
फेसबुके लवमा परेर श्रीमान छाडेर भागेकि युवतीकाे मुम्बर्इमा यस्तो बेहाल… भिडियो
Buletin Post July 13, 2018 भिडियो, समाज	0
पाँच वर्षअघि आफैंले रोजेको केटासित उनले बिहे गरेकी थिइन् । सबथोक ठीकठाक चलिरहेको थियो । विवाह गरेको २ वर्षमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवार औधी खुसी थियो । तर श्रीमान श्रीमती दुवै बेरोजगार हुँदा परिवार चलाउन समस्या भयो । उनीहरूबीच बेला-बेला विवाद पनि हुन थाल्यो । आर्थिक समस्याका कारण परिवारमा तनाव